Q. Midoobay iyo M. Yurub oo cambaareeyey weerarkii Kabul
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarkii dhimashada dhaliyay ee Khamiistii shalay ka dhacay garoonka dayuuradaha ee Magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
Hadalkaasi waxaa sii daayay Stephane Dujarric oo ah Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay.
Ugu yaraan 103 oo isugu jiray 90 reer Afghanistan ah iyo 13 ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa ku dhintay weerarka, sida laga soo xitay Pajhwok oo ah wakaaladda wararka ee ugu weyn Afghanistan iyo Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka.
Guterres ayaa ugu yeeray weerarkaa mid argagixiso oo lala beegsaday dad reer Afghanistan ah oo ku xoonsanaa garoonka, iyagoo doonayay inay dalkaasi ka baxsadaan, ka dib markii dhawaan dalkaasi uu la wareegay ururka Taliban.
Isagoo qabanayay shir Ja’raa’id oo kooban ayuu afhayeenka u hadlay Qaramada Midoobay, Dujarric, uu u sheegay warfidiyeenka in dhacdadan ay hoosta ka xariiqeyso sida xaaladda Afghanistan aysan cagaha ugu taagneyn.
Xoghayaha Guud ee Gaashaanbuurta Nato Jens Stoltenberg ayaa isna fariin uu soo dhigay Twitterka si kulul ugu cambaareeyay weerarkaas oo uu ku tilmaamay mid bahalnimo oo ay argagixisadu ka dambeysay. Waxaa uu sheegay in Isbaheysigooda ay ka go’antahay sii wadista daabulka dadka ay ka soo saarayaan Afghanistan sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay dad badanna ku soo qaadi karaan.